Na-arụ ọrụ na Ntinye aka iji gbochie ụgbọ njem nke Tuzla Çayırova | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliTuzla Çayırova Transportation Project
06 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
rụọ ọrụ na ntanetị iji belata njem nke nnu na cayirova
Obodo Kocaeli na-aga n'ihu na-emejuputa atumatu dị iche iche iji wepụta ụgbọ njem dị mfe ma dị mma n'akụkụ niile nke obodo. Roadszọ ọhụụ na-eme ka okporo ụzọ dịkwuo mfe, ebe ụzọ ọzọ na-eme njem na-eme ka ụmụ amaala nwee ntụsara ahụ. N'ime ụzọ a, ụzọ njikọ Çayırova ga-adị mfe iji jikọta ya na Istanbul. Thezọ ejikọtara ọnụ n'etiti agbata obi Tuzla-Şifa na Çayırova ga-eme ka njem dị n'etiti mpaghara abụọ a. A na - egwu olulu mmiri ugbu a.
MAT AND AH OFM F NA ROLỌ AH BRR BRR BR AH BRRIDRID BIDARA
N'ime oru ngo nke a ka na-aga n'ihu, a rụzuru ụkwụ niile na ntanetị nke akwa ahụ. A wụsara akwa mmiri nke njikọ njikọ ahụ. A na-aga ugbu a olulu na mmiri ga-esochi okporo ụzọ njikọta mmiri. Mgbe ogwugwu ahụ ma rụchaa ọrụ, arụpụta mmiri mmiri mmiri na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ nke okporo ụzọ njikọ ga-amata.
Tuzla Çayırova Njikọ tozọ Breathe na Transportgbọ njem
Nnyocha nnyocha banyere Tuzla-Çayırova Connection Road
Ụzọ ohuru ohuru n'etiti Tuzla na Çayırova
Tuzla Çayırova Njikọ Ọdọ Mmiri Bridge
Na-arụ ọrụ iji Jikọta Buca na Ọdụ ụgbọ ala ikpeazụ
Mfe Nweta Fatih na Çayırova Na-azụ Ụlọ
Ga-zuru ike Mpaghara okporo ụzọ na Altınordu…
A ga-agwụ Ụlọ Ọkụ Na-ahụ Maka Ọkụ na Çayırova 3 n'otu ọnwa
Ogige Agụba Çayırova bụ Kocaeli kachasị…
Çayırova na Fatih Train Stations Njikọ Njikọ…